Ndimkhuphe njani unyana wam eVenezuela -Geofumadas
Ndenze njani unyana wam waseVenezuela
NgoFebruwari, 2019 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Emva kokubona ikonsathi yokunceda abantu eVenezuela, ndagqiba kwelokuba ndigqibe ngeleta endandingakwazi ukuyigqiba. Ukuba ufunda iposti, malunga yam odyssey ukushiya iVenezuela, ngokuqinisekileyo babenomdla wokwazi ukuba lwaluphele njani uhambo lwam. Ubunzima bohambo buqhubekile, bendibaxelele ukuba ndingathenga itikiti lam lebhasi eCúcuta kwaye ekugqibeleni ndiyigxibile ipaspoti yokungena. Ewe, ngosuku olulandelayo sakhwela ibhasi eya eRumichaca - umda ne-Ecuador-uhambo lwalulingana neeyure ezili-12, safika ngentsimbi yesibini ekuseni. Ngenye imini kwisikhululo sase-Ecuador, kwafuneka ndilinde ezinye iintsuku ezimbini emgceni; njengokuba ndandilambile ndibhatale $ 2 ngesidlo sasemini ebendinaso: chicken a la umququzeleli kunye nelayisi, isaladi, i-chorizo, ubhontshisi obomvu, amafries aseFransi, i-Coca-Cola kunye nekhekhe le dessert
-ukuba ukutya, mna ngokwenene kwakungcono kakhulu kohambo-.
Emva kwesidlo sasemini, sahlawula iteksi ukusuka eRumichaca ukuya eTulcán, ukusuka apho kwafuneka siqhubekeke siye eGuayaquil okanye eQuito, okwasimangalisa ukuba kwakungekho zibhasi zolawulo ziye kwezi ndawo zimbini, ukuze siyeke ukulinda sithathe ibhasi engenalo naluphi na uhlobo wentuthuzelo. Kule inani elikhulu labasebenzi abasemagunyeni, amapolisa kunye noonogada, babuze ukuba kukho abantu baseColombia ebhasini--Andizange ndiyazi isizathu -. Siqhubeke nohambo, safika kwisikhululo seenqwelomoya eQuitumbe sakhwela enye ibhasi eya eTumbes, ekufikeni kwethu sichithe olunye usuku silinde ibhasi eya eLima, kodwa asibanga salinda, sagqiba kwelokuba sihlawule enye itekisi. Kwakuziiyure ezingama-24 ndisendleleni, de ekugqibeleni, ndakhwela ibhasi ndisiya emazantsi esixeko saseLima, apho ndihlala khona ngoku.
Ziye zaba ziinyanga zomsebenzi onzima, umsebenzi onzima ndingathi, kodwa nje ukuba namandla okuthenga ukuhlawulela iinkonzo, indawo yokuhlala, ukutya kunye nokuphazamiseka ngamanye amaxesha, kundenza ndizive ukuba wonke umzamo ufanelekile. Ngeli xesha, bendinemisebenzi emininzi, njengoko besitsho kwilizwe lam, ndibulala nayiphi ingwe; Ukusuka ekuthengiseni ilekese kwisikhululo segesi, umncedisi wasekhitshini kwivenkile yokutyela, ukugqitha kukhuseleko kwimisitho, ukuqhubeka nomncedisi kaSanta kwindawo yokuthenga, ndenze izinto ezininzi ukugcina imali yonyana wam kunye neendleko.
Ndatshele unina ukuba, ngenxa yezizathu ezicacileyo zeengxaki zezoqoqosho nezentlalo, asikwazi ukuqhubeka nokuvumela unyana wethu ukuba akhule kwaye aphuhlise kuloo ndawo. Nangona umama kunye nathi sasinokude, wavuma ukuba kwakuyinto efanelekileyo kuye nakwikamva lakhe.
abantwana suku ngalunye na, ebhadula kwizitalato eVenezuela, bambalwa ashiye ikhaya ukunceda, abanye kukushiya umamkelo wabo wokudla abantwana abancinane, abanye kuba meko iye yabangela ukudandatheka kunye nempilo yengqondo iingxaki ekhaya -Abakhetha ukuhlala kude nekhaya-kwaye abanye ngoku bahlanganyele ebugebini. Abaninzi ingqesho abantwana abanganyanisekanga ukuze zisetyenziswe ubusela, kutshintshiselwano isidlo ukuba balale.
Njengoko uninzi lwaziyo, intlekele eVenezuela ayikho kuphela kwezoqoqosho, yinto yezopolitiko, ifikelele kwiimeko ezintle kakhulu, umzekelo, indlela indodana yam ingazange ifakwe ipasipoti yayo; yahlolwa ngeendlela eziqhelekileyo ukucela entsha, ukuba kwakungenakwenzeka, ukhetho olulodwa kuphela lwalubizwa ngokuba luncedo, oluvumela ukuba ipasipoti imiselwe iminyaka emibini. Ewe, asizange sikwazi ukuqhuba inkqubo enjalo elula, kufuneka ndihlawule i-600 U-D ngalolo xesha kumphathi, ondiqinisekisile ukuba ukongezwa kuya kukhutshwa.
Abantwana kunye nabaselula bayabandezeleka kakhulu kule meko, abaninzi bawazi ubomi babo obutshanje, indlala ngenxa yokungabikho kwemithombo kunye nokungasebenzi kwezibonelelo ezisisiseko. Abaninzi baye kwafuneka baye emsebenzini, bayeke ukunyuka kwamazinga okuphuma esikolweni minyaka yonke, ngenxa yokuba bafuna ukufumana indlela yokunceda ekhaya.
Ekubeni unento ebaluleke kakhulu - ipasipoti - saqala iphepha, oko kukuthi, iimvume zokuhamba, kuba njengamanye amazwe amaninzi; Abancinci abakwazi ukushiya ilizwe ngaphandle kwemvume efanelekileyo esayinwe ngabazali bobabini kwaye iqinisekiswe liziko elifanelekileyo. Kwafuneka sihlawule i-imeyile ecacileyo, ukuze ndiyityine amaphepha afanayo kwaye ndikwazi ukuyihambisa.
Umama wakhe uthathe isigqibo sokuza naye, ndamcacisela ukuba ndizomxhasa kuphela xa efika, kuba bendilinganiselwe ekuhlawuleni iindleko zonyana wam. Ukwamkela iimeko, kunye nokukwazi ukugcina kangangoko ndinako, -Ndade ndayeka ukutya iintsuku ezithile-Ndamcela ukuba athenge itikiti, waphatha i-yakhe.
Xa ndashiya iVenezuela, ndalinganisa i-95 kg, namhlanje ubunzima bam i-75 kg, imeko yoxinzelelo kunye nokunciphisa, kwathintela ubunzima bam.
Ndiyabulela kuThixo, le ndinyana akazange ukuthenga kwi-terminal efanayo ukuba Ndabaleka kunye bayahlelwa ukuba akwazi ukuhlawula kuye ibhasi elawulayo ukuya ku San Cristobal, yaye ukusuka apho wathabatha iteksi ku San Antonio del Tachira; Apho bachitha ubusuku ihostele, kufuneka uqonde indlela ekunzima ngayo kuba Chamo -selula-hamba kuyo yonke inkqubo yokuhamba. Ihluke kakhulu into yokuba umntu omdala anganyamezelela, iintsuku nobusuku ngokuvulekileyo, kodwa andikwazanga ukuvumela unyana wam ukuba adlule kwimeko efanayo, nangaphezulu xa sasingazi ukuba bazakujongana njani xa besiya eCucuta.
Ngosuku olulandelayo, bathabatha ngaphambili waqesha ukuba ubasuse ukuba iteksi umda, apho, njengoko kwafuneka alinde iintsuku ezimbini, eli xesha hayi umgca labantu abafuna ukuhamba Venezuela, eli xesha kwaba yi sokusilela zombane hayi vunyelwe ukuxhuma ulwazi lweziphathimandla ze-SAIME, ukwenza inkqubo yokutywinwa.
Xa uphawu sicatshulwa, baye baqhagamshelana umntu andinceda, wabanika ukudla kunye ukulala kude kube ngengomso. Ukuba uthenge itikiti kude Rumichaca, kwaqalisa mala, ukuba abaninzi Venezuelans lowo kwiintsuku ubuncinane 4 ukuya Ecuador, ingxaki yaba kukuba urhulumente yase ekhutshwe ezi ntsuku ingxelo ucacise ukuba nje emdeni abo Venezuelans egade ipaspoti
Ngenxa kaThixo, nangomzamo omkhulu ndihlawulele ukuvuselelwa kwepaspoti, bendingayicingi nokuyicinga, bekuya kwenzeka ntoni ukuba banesazisi njengendlela yokungena. ERumichaca bathenga itikiti lokuya eGuayaquil, ukufika kwabo bachitha ubusuku kwenye ihostele ethobekileyo, ngokukodwa benendawo yokulala. Ngobo busuku, ekuphela kwento ayicelile kunina yayiyinto yokutya, kwaye bafumana inqwelo eyayithengisa empanada eziluhlaza, yayiyintlama yomgubo webhanana eluhlaza eyayigalelwe inyama netshizi, nantso into ababenayo ngesidlo sangokuhlwa.
Ngomso wam wabiza, wayekhathele kakhulu, ndikhumbula nje oko ndamxelela - Utata othobileyo, baya kufika, kuncinci kuyadingeka -, ezama ukukhulula ukukhathala kwakhe ngokumkhuthaza. Missing nje iiyure 4 kude, bakhwela ibhasi eya Tumbes, yaba ukhwele cwaka emva lonke, kwi ibhasi balale kancinane-ngendlela leyo ngaphezu kancinane 20 hours- bazakhele kwaye Babesendaweni yokuthenga ithikithi ukuya eLima.
Unyana wam akazange abe ngumntwana okhononda, akaphikisi nto, nokuba unina okanye kum, uyathobela kwaye uyamhlonela, kule meko wayeza kuthi wayengumntu onesibindi. Ngeminyaka eyi-14 kuphela wayejongene nemeko yokuba umkhulu wam wayehlala, umNtaliyane owaya eVenezuela ebalekela imfazwe, kwaye akazange ahambe -apho wafa- imeko apho abaninzi baseLatinos nabaseYurophu baphumelela.
Okwangoku unina usebenza njengendoda yenkonzo -kucoca-, emva kokuba egqibe usuku, uthengisa iilekese kwimpompo yegesi, -naye wenza inxalenye yakhe yokuphila komntwana-, kwaye yena, kakuhle ... ndithi kuwe kwinyanga encinane engaphantsi kwe-6, esikolweni wanikwa iintsuku ezimbalwa ezedlule ukuqaphela ukuba: "umntwana owanikezelwa kwizifundo zabo, umhlobo omhle kunye nomntu obalaseleyo". Wagqiba umnyaka wakhe wesikolo njengowokuqala kwiklasi yakhe, kwaye mna, ndiqhayisa ngokukwazi ukufaka isandla kwi-intuthuko yakhe engcono, ukungahlali imihla ngemihla kunye noxhala, ukukhathazeka okanye ukwesaba. Ndisaqhubeka ngisebenza nzima, -ngena kwi-lante- kuye, kumama, ngekamva lethu.
Ekugqibeleni, ngenxa umhleli egeomates, ngubani ukufunda ngexesha lam xa wayesebenza urhulumente obonisa umsebenzi wam yaye othe ngenceba wandinika ithuba ukushicilela umbhalo ushiya imiba geomatics; kodwa loo nto ayishiyi imibhalo yakhe xa ethetha ngeengxaki kwiHonduras.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba ezi-3 kunye neziganeko ezingama-21 ezibalulekileyo kwimeko ye-GEO-Ukuqala ngo-2019
Post Next Iintsomi ezi-5 kunye nenyani ezi-5 zokudityaniswa kwe-BIM-GISOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Ndimkhuphe njani unyana wam eVenezuela"
Yiya eColombia, kukho intlungu efanayo! Kutheni ukungabikho kwemigaqo!